Iphrofayela Inkampani - Yangzhou Jetway ukuvakasha Co., Ltd
Ihhotela Izinsiza Setha
Ihhotela zamazinyo Kit
Ihhotela Ukushefa Kit
Umi 2001, inkampani yethu itholakala e Yangzhou, Isifundazwe Jiangsu, China. Imikhiqizo yethu ehlukahlukene ezisukela lokugeza Izesekeli, Emakamelweni Izesekeli ukuba Muhle Izesekeli, njll Emva 16years ukuthuthukiswa, inzuzo yethu yonyaka lidlule abayizigidi ezingu-12 zamaRandi. Ngaphandle kwalokho, ukukunikeza engcono kwamakhasimende kanye nemikhiqizo kumnandi, thina inikeza wena inqubo professional zokukhiqiza, control esiqinile impahla eluhlaza, Qedela uhlelo lokulawula izinga kanye umthamo enamandla manufactory.
Akhiwe ehhotela amenity edolobheni, imboni yethu ihlanganisa indawo ingqikithi 6000 square metres, kuhlanganise 6 workshop, ishede kanye 12 zokukhiqiza imigqa. ukuthengisela ikhono imboni yethu zifinyelela amasethi kwezigidi ezingu-20 inyanga ngayinye. 150 izisebenzi ezingomakadebona nokulawula izinga ithimba lethu lingakwazi ukuqinisekisa ukukhiqizwa nqampuna umhlabeleli.
Okokuqala, sinalo professional QC ithimba ukulawula ukukhiqizwa. Okwesibili, sinazo zonke amarekhodi eziningiliziwe imikhiqizo nonconformity. Ekugcineni, Senza bagcine amakhodi afanele zokuziphatha & imithetho kahulumeni.
Osayizi, nezinhlobo & imibala zingenziwa oda. Ungathumela nathi izimfuno zakho enemininingwane futhi iyoqhubela angajabula ukulungiselela ikhotheshini ngabanye imikhiqizo yakho ekwamukelweni imininingwane yakho thina. Uma okukhethile Kuye kwenziwa, umkhiqizo umxhumanisi ilungu lethu ithimba ezikhethekile bazosebenza nani ingcaca ongakhetha ezibalulekile nesikhathi kwezidingo.
Professional design ithimba
iqembu lochwepheshe ihlanganisa umklami kanye nabasebenzi lobuchwepheshe. Ithimba lethu unekhono ukuklama imikhiqizo ehlukene njengoba ngamunye imibono yakho.
Amakhasimende ethu ikakhulu ukuza yakha Melika, eYurophu nase-Asia emakethe phakathi-upscale. Futhi siye zithunyelwe emazweni angaphezu kuka-70 kanye nezifunda.
I amaphakheji imikhiqizo babe amakhadibhodi ibhokisi, bavuselele iphepha ebhokisini, isikhwama ECO-friendly, isikhwama PE, iphepha lukathayela, PP ifilimu, ibhamuza ikhadi. Futhi wonke amaphakheji 'umbala, isayizi, logo ukuphrinta kungenziwa ngokuvumelana nezicelo iklayenti.
Party weMnyaka 2017
Setha Yegatsha Sethu Esisha Ngo-Beijing